ONG Bel Avenir : nandray mpianatra avy any Normandie | NewsMada
ONG Bel Avenir : nandray mpianatra avy any Normandie
Tao anatin’ny roa herinandro izao, manabevoho ny toeram-piompiana ao amin’ny Ong bel Avenir Fianarantsoa sy Mangily ireo mpianatra ankizivavy 16 avy any amin’ny Lycée Jeanne d’Arc ao amin’ny tanànan’i Havre ao Normandie Frantsa.
Mitsinjara amin’ny andraikitra napetraka aminy ireo mpianatra teratany vahiny ireo. Tanjona ny fampivoarana ny tontolon’ny toeram-piompiana ho tonga manara-penitra amin’ny lafiny rehetra.
Voakasik’izany ny hatsaran’ny tontolo manodidina, ny fahadiovan’ny tanàna ary indrindra ny fitsinjovana ny tontolo iainana. Eo indrindra koa ny lafiny angovo azo havaozina sy ny fampindramam-bola madinika.
Mikasika ny sehatry ny fahasalamana, niresaka momba ny vohoka aloha loatra sy ny aretin’ny taovam-pananahana tamin’ireo ankizy mipetraka ao amin’ny akanin’ny ONG Bel Avenir i Hélène sy i Adriana.
Nanaiky izy mirahavavy ireto fa mbola lohahevitra fady sy tsy firesaka ao an-tokantrano eto Madagasikara ity momba ny fananahana ity kanefa nalalaka tsara ny serasera teo amin’ireo samy tanora ary afaka nanontany izay rehetra tiany ho fantatra mikasika io lohahevitra io.
Niresaka momba ny maha zava-dehibe ny zaridaina sy ny zava-maitso kosa i Mathilde sy Julia ary i Justine. Ilaina ny mametraka anarana momba ireo karazan-javamaniry eny- an-jaridaina mba hahasarika ny mason’ny mpitazana sy hanome fahafinaretana ny maso.
Tetsy andaniny, nitondra ny anjara birikiny amin’ny fahaiza-manaony eo amin’ny sehatry ny fiompiana sy fambolena ary ny fampianarana teny frantsay, tantara ary jeografia ihany koa ireto mpianatry ny lycée Jean d’Arc ireto.